Marketing Staff | Global World Insurance ﻿
1.5.2020, Full time , Insurance / Pensions
•	Customer များနှင့်ပြေပြစ်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရမည်။
•	ကုမ္ပဏီမှ ချမှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် (၂၀ - ၂၅)အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	Computer Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။
•	Sales & Marketing အတွေ့ကြုံအနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။
•	အာမခံလုပ်ငန်းအား စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
•	လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။
234 Days, Full time , Insurance / Pensions
•	Making sale call to showrooms and other motor service industries •	Makingasale appointment for car insurance and fire insurance •	Supporting to Senior, Supervisor and Management team during meeting and appointment •	Survey check for motor and fire insurance •	Visiting the bank to get approval •	Collecting payment •	Delivering documents such as policy •	Follow up to the customers who are old and new •	Perform other duties as assigned.
•	Oversee day-to-day sales, monitoring, and forecasting to better understand the market •	Identify, develop, and evaluate sales & marketing strategy, to achieve department’s sales targets. •	Meets marketing and sales financial objectives by forecasting requirements; preparing an annual budget; •	scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions •	Accomplishes marketing and sales human resource objectives by recruiting, selecting, orienting, training, assigning, •	scheduling, coaching, couns ...
266 Days, Full time , Insurance / Pensions
285 Days, Full time , Insurance / Pensions
•	Identify, develop, and evaluate marketing strategy, based on knowledge of establishment objectives, •	market characteristics. •	Formulate, direct & coordinate sale activities and policies to promote products and services, working •	with advertising and promotion. •	Use sales forecasting and strategic planning to ensure the sale and profitability of products or services, •	analyzing business developments and monitoring market trends. •	Establishes marketing goals based on past performance and market forecasts. •	Main ...
•	MSSQL database servers, windows servers, workstations/desktop •	System virtualization such as VMware •	Storage devices such as SAN & NAS, EMC storage •	Plan and design for system infrastructure •	Troubleshooting system and infrastructure related issues •	Beapart of the 24/7 team to perform all maintenance operations •	Can travel across the country if it may need to visit site •	Web Development Knowledge
•	အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Customer မ်ားႏွင့္ေျပျပစ္စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံ ၀◌န္ေဆာင္မူ ေပးနိုင္ရမည္ •	Company မွခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ◌္း စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာနိုင္သူျဖစ္ရမည္
•	အာမခံလုပ်ငန်းအား စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ •	လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ •	Customer များနှင့် ပြေပြစ်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရမည်။ •	Company မှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း ၊စည်းကမ်းများကို လိုက် ...
Office Staff (Marine)
•	Customer များနှင့်ပြေပြစ်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရမည်။ •	ကုမ္ပဏီမှ ချမှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Office Staff (Claim)
Office Staff (Admin & HR)
Office Staff (Fire)
•	ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ၿပီး မိမိ Team အား ဥ◌ီးေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္
Assistant Supervisor(Admin & HR)
•	အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္ •	ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္
•	အာမခံလုပ်ငန်းအား စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ •	လိုအပ်ပါက နယ်ခရီး သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Customer များနှင့်ပြေပြစ်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရမည်။ •	Company မှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း ၊စည်းကမ်းများ� ...
Marketing Staff Marketing & PR Jobs jobless jobsinyangon Global World Insurance Marketing & PR jobs Marketing & PR jobs Insurance/ Pensions Jobs in Myanmar, jobs in Yangon